Nkwụghachi ụgwọ site na nnwere onwe, terychịkwa na Nzube | Martech Zone
Kwụọ ụgwọ maka nnwere onwe, Maschịkwa na Nzube
Gwọ Ọrụ. N’ebe ole na ole gara aga, ọ na-eju ndị isi m anya na enweghị m mmasị n’ụgwọ ọrụ ego. Ọ bụghị na achọghị m ego ahụ, ọ bụ na achọghị m akpali akpali site na ya. Aka adighi m. N'ezie, ọ na-akparị m mgbe niile - na m ga-arụsi ọrụ ike ma ọ bụrụ na m nwere karọt na-agbasa n'ihu m. Ana m arụsi ọrụ ike mgbe niile ma na-arụrụ ndị m na-arụrụ ọrụ ọrụ.
Ọ dị ka ọ bụ naanị m. Nke a bụ nnukwu ngosi sitere na Dan Pink si RSA na mkpali.
Ihe n'ezie na-akpali a cognitive ọrụ bụ:
Ndozi - ikike inwe ma nwe mkpebi nke gị.
Ike - ohere iji mara talent ma ọ bụ nkà.
nzube - tinye mmadụ n'ọkwá ebe ha mere n'ezie ihe dị iche.
Ya mere,… na-azọpụta gị ego na-akwụsị iche ndị ọrụ gị. Na ahia, a na m ahụ ọtụtụ ndị isi azụmaahịa na-etinye aka na ngalaba azụmaahịa ahịa ha… na-emejọ ya ma ọ bụ na-ebibi ya kpamkpam. Banye n'ụzọ ma nye ndị ọrụ gị ohere ịkwanye nsonaazụ ịchọrọ ka ha nweta. Gosi ha uzo ozo ma mee ka ha nwee ohere igbanwe ahia gi.
Tags: ndi mmaduna pinkndị ọrụ na-agba umeọrụ mkpaliọrụ ụgwọ ọrụọrụmkpaliikenkwalinzubeụgwọ ọrụRSA
Na mgbakwunye ndị mmekọ - Iwuli Ọwa Channel